Rieter & Marzoli Auto Doffing Ring frame အတွက်သင့်လျော်သော China Gripper membrane (Polyurethane) ။ ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ KS
ziner ဦး ထုပ် gripper
SULZER Projectile TW11 အတွက်ဘရိတ်အုပ်ခြင်းအောက် / အထက် ...
လျှပ်စစ်စီးပွါးသန့်ရှင်းရေးသေနတ် / လက်ကိုင်အိတ် ... \_ t
Schlafhorst 338 / x5 ကြိုးတင်းမာမှုအာရုံခံ
Rieter & Marzoli Auto Doffing Ring frame အတွက်သင့်လျော်သော gripper membrane (Polyurethane) ။
Gripper membrane (Polyuretheane) သည်အရှည်လျားဆုံးသော auto doffing ring frame spinning machine အတွက်လုံး ၀ မပျော်နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်သက်တမ်းကိုကြာရှည်ခံသည်။
Min.Order အရေအတွက် - 1000PCS
ထောက်ပံ့ရေးစွမ်းရည် 800000pcs / တစ်လ
ငွေပေးချေမှုသတ်မှတ်ချက်များ: T / T, L / C
အပိုင်းအမည် gripper အမြှေးပါး (Polyurethane), tpu
သက်ဆိုင်သောစက်ပုံစံ Rieter & Marzoli Auto Doffing Ring ဘောင်။
အရွယ်အစားသို့မဟုတ်အပိုင်းနံပါတ် Marzoli: 62 * 64,56 * 64,44 * 32,၄၅ * ၄၂ Rieter: 39 * 32
Hs ကုဒ် 84483990
အသားတင်အလေးချိန် (G) 18
၁။ Oder မတိုင်မီအရွယ်အစားကိုအတည်ပြုပါ
2. ထူးခြားချက်များ - မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အမြှေးပါးပြွန်ကို Poly Urethane ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးရေရှည်သက်တမ်းသတ်မှတ်ချက်။ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - Rieter Autodoffer အတွက် Gripper membrane ။
ကို C: သင်္ဘော
၁။ ဆိပ်ကမ်း - ရှန်ဟိုင်း
၂။ သင်္ဘောဖြင့်သင်္ဘောဖြင့်ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ Courier / Air လေကြောင်းလိုင်း၊
၃။ ပို့ကုန်စံသေတ္တာ / သစ်သားအိတ်
၄။ ကုန်သွယ်ရေးဝေါဟာရများ - EX-WORK, FOB, CNF, CIF
၁။ ဓာတု nitrile ရော်ဘာ ၁၇ ခုနှင့်အမျိုးမျိုးသောဓာတုပစ္စည်းများပါဝင်မှုသည် ၁၀၀% အခက်အခဲကင်းမဲ့ပြီးခံနိုင်ရည်ရှိသည့်စွမ်းရည်ကိုရရှိစေသည်။
3.Supply နိုင်စွမ်း 800000pcs / တစ်လ
(၄) ကျွန်ုပ်တို့သည်လုပ်ငန်းခွင်ရှိလူသိများသောနာမည်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်းနှင့်စွမ်းရည်မြင့်မားခြင်းတို့အတွက်တန်ဖိုးရှိသော Gripper Membrane ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကမ်းလှမ်းသည်။ သူတို့ကဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ကြံ့ခိုင်ဖြစ်ကြပြီးမြင့်မားသောသက်ရောက်မှုအစွမ်းသတ္တိရှိသည်။ Gripper အလွှာသည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီးအထူအမျိုးမျိုးဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
၁။ အရည်အသွေးကောင်း ကောင်းမွန်သောအရည်အသွေးကိုအာမခံပေးနိုင်သည့်တည်ငြိမ်သောစက်ရုံများစွာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ "
2.Competitive စျေး: အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းနှင့်အတူစက်ရုံတိုက်ရိုက်ပေးသွင်း။
3. အရည်အသွေးအာမခံချက်တစ်ခုချင်းစီကိုပစ္စည်းသည်, 100% အကြိုစမ်းသပ်မှု။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးအချက်ဖြစ်လျှင်ပြGoodsနာရှိသောကုန်ပစ္စည်းများ၏တန်ဖိုးကိုကျွန်ုပ်တို့ပြန်ပို့နိုင်သည်။
၄။ ၂၄ နာရီအွန်လိုင်း နှင့်လက်ကိုင်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုသေချာအောင်လုပ်ခြင်း။
ရှေ့သို့ အထည်အလိပ်စက်ပစ္စည်းအတွက်စွမ်းအင်ချွေတာခြင်းနှင့်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်လက်စွဲ Roller Picker Fluff သန့်ရှင်းရေးသေနတ်
နောက်တစ်ခု: Texparts, Skf နှင့် Lz အတွက်အထည်အလိပ်စက်ကြိတ်စက်နှင့်ဆေးထိုးအပ်
လိပ်စာ: Jiangu ပြည်နယ် PRChina, အခန်း 1105, No.401, အရှေ့ Xihu လမ်း, Liangxi ခရိုင်, Wuxi, (ZIP: 214011)
ဖက်စ်: 0086- (0) 510-82445199